QM oo war Cajiib ah ka soo saartay doorashadii ka dhacday Garowe & Guusha Deni | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA QM oo war Cajiib ah ka soo saartay doorashadii ka dhacday Garowe...
QM oo war Cajiib ah ka soo saartay doorashadii ka dhacday Garowe & Guusha Deni
War saxafadeed kasoo baxay xafiiska Howlgalka Qaramada Midoobe ee Soomaaliya ee loosoo gaabiyo UNSOM ayaa ugu horeyn loogu hambaliyeeyay Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa cusub ee shalay loo doortay maamulka Puntland.
Isla warkaasi ayuu Ku-simaha Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee dalka Soomaaliya ahna ku xigeenka ergeyga gaarka ah ninka lagu magacaabo Raisedon Zenenga, waxa uu madaxda cusub ee maamulkaasi faray in sida danta reer Puntland ku jirto ay ka shaqeyaan muddo xileedkooda.
“Ugu horeyn waxaan hambalyo leenahay Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka cusub ee Puntland, waxaan sidoo kale hambalyo leenahay guddiga doorashada ee soo qaban qaabiyay hanaanka doorashada maamulkaasi ay u qabsoontay, waxaan madaxda cusub leenahay sida danta dadka reer Puntland ku jirto ugu shaqeeya dadkiina” ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi.
Waxaana ay intaasi ku sii dareyn ” waxaan si dhaw ula shaqeyn doonaa madaxweyne Deni iyo ku xigeenkiisa Karaash”.
Waxaa isasoo taraya Masuuliyiinta kala duwan ee dhambaalada hambalyada u diraya madaxda cusub ee maamulka Puntland.